Ninkii hodan ah lacag aan na badbaadin karin. Money ma waxaad badbaadin kartaa samada. Waxaad aadan iibsan kartaa badbaadada. Waa wax aan macquul.
Luke 16:19 Waxaa jiri jiray nin hodan ah kuwaas oo dhar gududan oo jilicsan sidan oo maalin kasta oo farxad iyo dabaaldeg ku noolaa.
Ninkii hodan ku noolaa nolol riixdey. Waxa uu maanta ku nool noolaa dad aad u badan.
Waxay ku nool yihiin haatan iyo aadan u malayn in ay jirto daa'in ah wakhti kasta oo soo dhexgelin karo.
In farxad iyo dabaal
Nin wuxuu ahaa mid aan ku faraxsanayn. Waxa uu ku noolaa ee "farxad" iyo "Xisbiga" maalin kasta. Dadka nolosha ah Ilaah iyo Ciise oo aan ku socon aadan ku faraxsaneyn iyo murugo.
Waxay yeelan karaan farxad iyo naftooda, waxay noqon kartaa diyaafad. Si aad u farxad iyo nolol ma ku heshiiyaan in ay waara waa arrin oo kala duwan. Laakiin waxaa laga yaabaa in ay dareemaan in la joogo waa uu ku faraxsan.
Waa maxay sababta aad u baahan tahay Ciise
In la soo dhaafay, mid ka mid ah ka odhan kari waayeen in ay dadka u baahan Ciise in la faraxsan. Or in ay Ciise u baahan yahay inuu ku faraxsan yahay.
Laakiin tani ma aha sababta aad ugu baahan Ciise. Waxaan aragnaa in dadka dunida ku noqon kartaa farxad iyo farxad.
Ninkii taajirka ahaa ayaa tusaale u ah in. Sidaas ma ahan sababta aad ugu baahan Ciise.
sababta aad u baahan tahay Ciise waa in Ciise la'aan aad lahagaajin badiyay cadaabta weligeed ah.
Waxaad badiyay Ciise la'aan. Si ay u badbaadaan waa in aad aqbasho Ciise. Kadibna waxaa laguu badbaadi doontaa oo dembiyadiinna oo dhanna waa cafiyan yihiin.
farxad iyo farxad True
Marba haddii aad hesho Ciise iyo badbaadi helay si aad u hesho inuu farxad iyo farxad. farxad iyo farxad waa ka qoto dheer yahay waxa aad ka hor inta lahaa.
Ka hor inta aadan ku farxay Dhaw, laakiinse haatan waxaad ka heli in aad la kulanto farxad dhabta ah xagga Ilaah.
Sheekada Ciise ninkii hodanka ahaa iyo Laasaros ma aha masaal. Waxaa dhacay.
Ciise magacyada marna masaallo, laakiin tani Xusuuso Ciise, Laasaros la odhan jiray. Tani waa sababta Ciise gaysteen dhacdo dhab ah.
Jirran iyo dibadda
Waxaa muhiim ah in Laasaros jiifay at ninkii hodanka ahaa ka iridda. Waxa uu xitaa ma geli. Waxa uu mamnuucay. Ma uusan iska leh iyaga. Wuxuu ka baxsan ahaa!
Oo Laasaros wuxuu ka boogo miidhan leh. Marka la barbardhigo ninkii hodanka ahaa. Wuxuu ahaa ka buuxaan caafimaadka.
Inkastoo uu ahaa mid ka buuxa caafimaadka, isagu ma uu ahaa badbaadiyey iyo badbaadiyey. Wuu lumay.
Liitay labadan runtii ahaayeen boqortooyada. Ka hor inta aan samada, waxa uu ahaa mid aad u liita, maxaa yeelay, isagu wuxuu lahaa rumaysadkii Ibraahim.
Ujeedada Ciise in aad u baahan tahay ma aha ugu horayn u leedahay caafimaadka. Ujeedada aan waa in aad ku badbaadi!
Waayo, waxaad leedahay ma Ciise, ka dibna aad lahagaajin badiyay cadaabta weligeed ah.
Inkasta oo ninkii taajirka ahaa u si wanaagsan lahaa, ayuu lahagaajin lumay.
Waxaa jira caafimaadka ee Ciise
Laakiin Ciise, waxaad heli kartaa caafimaadka. Waxaa jira caafimaadka magiciisa. Waxaa bogsiinaya iyada oo nabrihiisii ​​ka.
Laakiin waxa uu u caawiyo haddii aad qabto caafimaad, laakiin ma aha Ciise? Waxaad lumay, oo halkaas ku ahaa in ninkii hodanka ahaa!
Qaar badan oo hodan yihiin dadka saboolka ah
"Nin Poor," - uu soo horjeeda boqortooyada. Qaar badan oo ay hodan ku yihiin alaabta adduun, laakiin waxay yihiin dadka saboolka ah waayo, cirku.
ninkii miskiinka ahaa taajir xagga samada, oo wuxuu lahaa oo rumaysadkii Ibraahim.
Badan waxay leeyihiin rumaysadkii Ibraahim maanta. Waxay aaminsan yihiin in Ciise iyo aadna ku badbaaddeen. Waxay hodan waayo, cirku waa iyo doonaa maalin waxaa ka mid ah.
Laakiinse kuwa hodanka ah weli rumaysad u lahayn ma aha hodan xagga samada, iyo sidoo kale ay halkaas ma tegi doonaa.
In aad aqbasho Ciise here dhulka
Tani waa sababta ay muhiim ah in aad halkan ku dhimanayaana aqbali Ciise oo aanay u badbaadin. Tan iyo markii ay goori goor tahay.
Waxaa halkan waa dhulka aad aqbasho Ciise iyo badbaadi. Ka dib marka aad ku dhiman, ma aad aqbasho Ciise.
Ka dib marka aad ku dhiman, ma jirto fursad aan si aad u abuurto murugo iyo toobad keenaan in ay Ciise.
Aanad garanayn marka waxa la joogaa wakhtigii si ay u dhintaan
Aanad garanayn marka waxa la joogaa wakhtigii si aad u dhinto. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay in la aqbalo Ciise haatan halka uu jiro waqti.
Tan iyo markii ay goori goor tahay.
21 Oo isna wuxuu ugu xiisooday inuu u cunaan uu ka dheregno waxa miiska ninkii hodanka ahaa ka dhacay. Haa, eeyaha u yimid oo boogihiisa leefleefi jireen.
Waxaa laga yaabaa in ay ahayd xitaa si eeyaha ka faa'ideystay Laasaros. Waxay sameeyey cunto iyo a "cuntada" dheeraad ah wax yar ka heli haddii ay ka leefleefeen nabrihiisii.
Mar la weydiiyay aan wax badan
ninkii miskiinka ahaa si joogto ah gaajaysan. Wuxuu ku jiray baahan oo cunto ah. In uu u nuglaanshaha uu halkaas jiifay, riyoodaan oo ku saabsan cuntada.
Laakiinse isagu ma uu weydiin badan. Waxa uu u xiisooday oo kaliya kadib marka jajabka, halka frill hodanka lahu faro badan.
Sidaas darteed waa la carruurta Ilaah. Iyagu ma weydiin aad u badan. Waxay ku faraxsan yahay waxa ay yihiin. Laakiinse ninkii miskiinka ahaa oo aan xitaa waxaa sida uu ku lahaa waa lahaa.
Saboolka ah iyo kuwa buka
Waxa uu halkaas jiifay, ee iridda, masaakiinta, kuwa buka, oo loo naxo, oo ku riyooday cuntada looxyada gudaha.
No, ma uu ku riyoon ku saabsan cuntada looxyadii, laakiin jajabka miiska hoostiisa. Laakiin ma kuwaas oo jajabka uu lahaa in ay joojiyaan.
Miskiinka baahan yahay daryeel caafimaad, laakiin daryeelka oo dhan uu ka helay waxay ahayd in eeyaha boogihiisa leefleefi jireen.
Faa'iideysan iridda ka baxnay,
Eeygu wuxuu ahaa mid hooseeya aad ka fekeri karto in Israa'iil, laakiin waxaa la sheegay in masaakiinta dhexgalay la jiray.
Labada eeyaha iyo masaakiinta ahaayeen iridda dibaddeeda.
Ilaah wuxuu arkay Laasaros
taajir ma arkaan Laasarosna, laakiin waxaa jiray nin arkay isaga oo ay ahayd Ilaah.
Ilaahna wuxuu arkay in uu rumaysad iyo isku halleeya. Miskiinka ku tiirsanaan karin Xoolo dunida ee.
qofka kaliya ee uu aamini karin in Ilaaha samada. Oo waa in siiya Xoolaha runta ah.
Laasaros lahaa rumaysadkii Ibraahim, iyo ugu dhakhsaha badan uu dhali doono si ay u socdaan waddooyinka oo dahab ah.
Malaa'igta guriga meeluu ku badbaadi
Luke 16:22 Sidaas daraaddeed ninkii miskiinka dhintay, oo waxaa malaa'igahu waxay u qaadeen si ay ula Ibraahim. Xitaa Ninkii hodanka ahaana waa dhintay, oo waxaa lagu aasay.
Laasaros miskiinkii dhintay. Laakiin wax la yaab leh ku dhacay. Malaa'igta u yimid oo u helay.
Malaa'igta waxay u kaxeeyeen Ibraahim noqon. Waxa uu galbiyeen by Malaa'igta!
Marka waxa la joogaa wakhtigii si ay u dhintaan kuwa rumeeyey ee Ciise, ka dibna Malaa'igta iyo meeluu guriga samada. Waayo, samada meeshii Ciise waa inay rumeeyey isku hallaysay.
Aadan xagga samada oo keliya tagaan. Malaa'igta aad meeluu!
Boqortooyada (ofrälste) si toos ah u yimid inuu jahannamada
Ninkii hodanka ahaana waa dhintay, oo waxaa lagu aasay
Laakiin ma la ninkii hodanka ahaa. Markii uu dhintay, sidaa darteed waxaa jiray Malaa'igta ma u yimid oo u helay.
Waxa uu leeyahay oo kaliya in uu dhintay oo la aasay. No wargeeyayaal jannada. Markaasaa aayadda ee soo socda, waxaan aragnaa in uu ahaa in cadaabta.
Waxaa jiray xataa jinniyadu ka mid ah kuwo isaga soo gaaray. Laakiin ka dib markii uu dhintay, sidaa darteed, wuxuu iska helay jahannamada xaq u galay.
Oo isna wuxuu lahaa wehel lahayn, laakiin waxa uu cadaabta si toos ah u yimid.
Waa dhulka aad go'aansato
Maxaa a kala duwan yihiin in natiijada. Oo halkan dhulka waa in aad go'aan ka halkaas oo in ay ku sugan daa'in.
Hayso daa'in ku yimid, ka dibna ay goori goor tahay si aad u go'aansato. Waxaa halkan waa dhulka aad go'aansato haddii aad xagga samada ama ma.
Marka aad tahay dhintay, ka dibna waxa aan u dambaysa. Waxaad ku noolaan doonaa on gobolka ruuxi ah iyo miyir qabo.
Waxaan arrintan u aragno gaar ahaan sheekada Ciise ninkii hodanka ahaa iyo Laasaros.
Laasaros waa dhintay, laakiin waxaa la geeyay by Malaa'igtu Ibraahim. Meeshaas waxaa jiray jiritaanka a miyir qabo.
In si la mid ah waa marka aad ku dhiman. Haddii aad ka tirsan Ciise, ka dibna aad la keeni doonaa malaa'igahu samada meeshii Ciise waa.
Oo meesha aad ku nooshahay doonaa in jiritaanka a miyir la Ciise.
Kuwa Dhiman aan rumaysadka xagga Ciise cadaabta, halkaas oo ay weligiis wuu noolaan doonaa in jiritaanka a miyir tegi doonaa.
Ka feker inaad weligaaba ogahay in kaalinta fursad ay ku aqbali Ciise oo aanay u badbaadin.
Waa in laga cabsado.
Xusuusnow in aad had iyo jeer la xasuusto in aad dooratay in aan la badbaadin oo Beeniyey Ciise. Waxaa laga yaabaa xanuunsan ugu xumaa ee la heli karo in cadaabta.
Jahannamo uusan haatan raagayn
Luke 16:23 Markii uu cadaabi Haadees ku jiray ayuu indhihiisa kor u taagay oo fog ka arkay Ibraahim, iyo Laasaros isaga.
Ninkii taajirka ahaa in cadaabta. Waxa uu ka lumay.
Ma waxay ahayd oo kaliya in uu ahaa xabsi xiran ka dibna mar dambe ma.
No, cadaabta uusan haatan raagayn. Waxaa jira rugta ka mid ah hawlaha ay jirto in marnaba dhamaado.
Waxa uu ku silcayaa jahannamada. Iyo Cadaab this ka socda. Marna dhamaado.
xusuuso wax walba oo
taajir ku noolaa jiritaanka a miyir qabo in cadaabta. Oo wuxuu xusuustaa. inuu naftiisa sharka leh - Waxa uu naftiisa u xusuustaa.
Sidaas daraaddeed isagu wuxuu u rajeeyay in Laasaros yimaado oo isaga siiyo biyo. Waayo, samada jirto biyo, laakiin cadaabta jiro dab kaliya.
Laakiin sida aynu arki doonaan in aayadda dambe, Laasaros ma cadaabta tegi karin.
Ma jiraan wax si ay u helaan in cadaabta waa
Waa u qosol badan in uu akhriyo sheekada ninkii hodanka ahaa iyo Laasaros.
Marka ay ku noolaayeen si hooseeyo Laasaros bukay, masaakiinta iyo gaajo ka baxsan ninkii hodanka ahaa ka iridda, halka uu lahaa dhinacyada uu, laakiinse ma uu isaga ku saabsan.
Haddaba isagu wuxuu rabay inay Laasarosna iman lahaa in uu gurmadka iyo isaga siin biyo qaar ka mid ah.
Miskiinka xataa halkaasna ma ay joogin in miiska ka soo dhacay, iyo sidoo kale doonayay hodan ku yeelan biyaha. "Daraa caaradda fartiisa biyo ah ..." Ma uusan weydiin wax badan, laakiin gabi ahaanba waxaa jiray wax ay u.
"Waayo, waxaan ololkan ayaan ku silcayaa." In cadaabta, cadaabka. In cadaabta uu dab jiro in marna ka demo. In dab this, waa Cadaab wayn oo loo dulqaadan karin.
Waa Ciise kuwaas oo sheegay sheekada dhabta ah ee ninkii hodanka ahaa iyo Laasaros. Oo Ciise ayaa sheegay in uu dab ka Haadees. In dab this cadaabi dadka.
Hubi in aad ma cadaabta galaan oo halkaas jirdilay dabka weligiis. No, toobad keenaan in ay Ciise iyo isaga hesho hadda.
Waxaa halkan dhulka waa in aad aqbasho Ciise Masiix iyo badbaadi. Tan iyo markii ay goori goor tahay.
xusuusta nolosha dunida
Luke 16:25 - Laakiin Ibraahim wuxuu ku yidhi, Wiil yahow, xusuuso inaad wanaagsanaa heshay, intii aad nool, oo Laasaros baxay xun. Haddaba, waxa uu raaxaysiiyey, adiguse waad silcin.
The deggan oo cadaabta soo xusuusan doonaa dhimashada. Waxay ha iloobin. Dhab ahaantii, ma ay xusuusan kaliya. Waxay sidoo kale xusuusiyay.
Ka dib markii aad ku dhintay sidaas ma joojin si uu u jiro. Waxaad tahay oo aad xusuusataan.
Waa inay jirdil daran. Bal qiyaas jahannamada ku soo xusuusan doonaa dembiga dhulka.
xanuunsan ugu weyn
Waxay la xasuusto in ay kaliya dembaabay blithely on aan fikir toobadda.
Waxay kaloo soo xusuusan doonaa oo dhan jeer ay la marti qaaday in ay toobad keenaan, laakiinse ayan samaynin.
Waxay xusuusan fursad kasta oo ay heshay in ay aqbalaan Ciise oo aanay u badbaadin. Laakiin iyagu ma ay qaadan.
Tani waa in ay ahaadaan xanuunsan ugu weyn. Xasuusta uu bångstyrighet.
Iyagu ma ay eedayn karo Ilaah aawadeed markay tageen si Jahannamo. Waxay ay ogaadaan in ay mudan yihiin xaq u leedahay in ay jiri.
The wanaagga iyo xumaanta
Ninkii hodan baxay uu fiican yahay marka uu nool yahay, laakiin hadda wuxuu heli doonaa soo guys xun. xun ayaa hadda kor loogu qaaday isaga oo leh.
Marka joogay Laasaros, ayuu ka bixi jiray xun, laakiin hadda uu wanaagsan heli doontaa. Waxa lagu diyaariyey, uu guriga yimid meeshii xaq u.
"Hadda, waxa uu raaxaysiiyey, adiguse waad silcin"
In samada, waxaa jira tacsida. Waa meel ka mid ah raaxada iyo tacsiyaynta. Laakiin Jahannamo waa meel ka mid ah Cadaab.
Waa maxay meel ha aad rabto in aad si ay u tagaan? Plågans goobta ama meesha tacsida?
Waxaa halkan dhulka aad doorato waa. Haddii aad rabto in aad hesho meesha gargaaridda, waa in aad aqbasho Ciise.
Kuwa heshay Ciise
Waxaa jiray fursad ma deggan cadaabta si aad u hesho in ay paradiset.De boodin karin farqiga inay janno. Waxay halkaas ma tegi karin.
Iyagu ma kori karo hoos u galay waadi ka dibna mar dambe la soo dhinaca kale. Waxaa aad u qoto dheer ahaa, haddii at dhan ma jirin hoose waxa ku jira. Malaha ma.
iriddii samada ee
Oo haddii ay lid ku ah filasho at dhan bartey imaan lahaa Albaabbada Samada at, ay ku qasbanaan lahaayeen in ay soo jeedin. Waxay dhab ahaantii marnaba la sii dayn lahaa, maxaa yeelay, iyagu ma ay la nadiifiyey ee dhiigga Ciise.
Waa kuwa heshay Ciise waa kuwa saafi ah in uu dhiig oo kaliya. Oo kuwa saafi ah in dhiigga Ciise geli karaan samada.
No jeestay dhulka ku soo celiyo
Sidoo kale waxaa jira jid uma soo celin dhulka ka soo cadaabta. wadada cadaabta waa unidirectional.
Ma jiro wax daafaca. Kuwa ku tegey cadaabta had iyo jeer waxaa jiri doona.
dadka deegaanka Jannada la ilaaliyo
Ibraahim ayaa sheegay in ninka hodan ah inuu deggan Jannada mana tagi kartaa jahannamada sababtoo ah farqiga weyn.
Tani waxay u muuqan karaan wax yar cajiib ah, laakiin haddii aad u malaynayso oo ku saabsan siinayaa tacsida wayn. Waxa aad ku badbaadi oo la badbaadiyey iyo daahiriyeen in dhiigga Ciise, ma jirto fursad aan si aad u cadaabta si ay u tagaan.
aadna ku badbaaddeen. Farqiga weyn ka hortagtaa in aad cadaabta si ay u tagaan. Waxa aad ka ilaaliya. Uma baahnid in aad in la walwalay in la badiyay. Waxaa lagaa ilaalinayaa.
Waxaad noqon kartaa mid gaar ah oo aad samada rumeeyey Ciise tegi doonaa.
Luke 16:27 - Ninkii taajirka ahaa wuxuu yiri: Markaas baan idin weyddiinayaa, Aabbow, oo aad isaga u dirtid reerka aabbahay.
Ninkii hodanka ahaana markay ogaadeen in aanay jirin caawimo isaga si aad u hesho cadaabta uu bilaabay inuu ku tukado.
Ma uusan ku tukado isaga nafsaddiisa u sidii hore markii uu biyo doonayay uu sameeyey, laakiin hadda wuxuu bilaabay inuu ku tukado, waayo kuwa kale.
Markii uu nool yahay, ma uusan daryeeli ku saabsan dadka kale, laakiin hadda si lama filaan ah uu bilaabay in ay u samayn, laakiin hadda waxay ahayd goor dambe. In cadaabta, ma heli kartid wax kasta oo jawaabaha salaadda.
Ninkii taajirka ahaa wuxuu lahaa hadda ogaaday inuusan marnaba awoodi doonaan in ay ka baxaan cadaabta. Wuxuu samada midna dhulka aan tegi karin.
Sidaa darteed wuxuu ka codsaday Abraham in Laasaros dib ugu soo laabto dhulka laga yaabaa. Waxa uu doonayay Abraham inay Laasarosna reerkii aabbihiis diro.
Markaas qoyska aabbihiis, oo sidoo kale jiray qoyskiisa, iyo walaalahiinna, iyo aabbihiis la mid ah.
Sameeyey ninkii hodanka ahaa abid wareeriyay qoyskiisa. Qoyskiisa? saaxiibbadiis? dadka kale? Ama wuxuu ahaa oo kaliya xiiseynaya iidaha iyo waxey?
Ehelu Jahannamo dan
Waxa xiiso leh in la ogaado in dadka deggan cadaabta dan ah oo ku saabsan kuwa ku Nagaateen Dhulka.
Waxay iyaga daryeela oo ku saabsan wax badan in mayna sidoo kale lagu cadaabta socday meesha ay joogaan.
Laakiin tixgelin hadda waa goor dambe. Waxa ay u lahaayeen dhulka.
dadka deggan dhulka ee ma maqli karaysaane baryadii cadaabta in aysan rabin in iyaga halkaas ka heli.
Waayo, cadaabta jiro aan gadaal ugu noqono.
"Goobta cadaab". Waxa ay ahayd oo keliya ma aha meel ururinta iyo ka dibna wax kale. No, waxa ay ahayd meel ay ku cadaab. Jahannamo waa meel ka mid ah Cadaab.
Luke 16:28 - si uu ugu digo shan walaalahay, waaba intaasoo iyaguna ay yimaadaan meeshan silaca leh.
Ninkii taajirka ahaa baryaa in cadaabta. Waxa uu joojiyey isaga qudhiisu weydiinaya markii uu ogaaday inuusan Eebase ma aha si aad u hesho jawaab salaadda.
Hadda waxa uu ku weydiiyo oo uu shan walaalo ah. Wuxuu waydiin Abraham inay Laasarosna walaalihiis u soo dir uga dig iyaga.
An nolosha dembiga leh ka walaacsaneyn
Waxaan fahamsanahay in ninkii hodanka ahaa ka walaalo ah ku nool yihiin dhulka si la mid ah sidii uu ku sameeyey. Dabaaldegyada iyo farxad maalin kasta. nolosha An walaacsaneyn, oo aan fikir ah daa'in ah u dhowaanin iyo meesha aad ku qaataan daa'in ah.
Laakiin in cadaabta ma jiraan jawaabaha salaadda. Waxaa halkan dhulka aad weydiiso waa. Tan iyo markii ay goori goor tahay.
Kuwa la doonayo in cadaabta
"Sidaas aadan sidoo kale waxay ka iman meeshan silaca leh." Jahannamo waa meel ka mid ah xaqiiqada. Halkaas oo ay dadku ku iman kartaa. Oo kuwa aad u hesho waxaa jira kuwa aan ka toobadkeenin dhimashada.
jahannamada Meeshu waa mid dhab ah. Tani waxa ay ahayd ninkii hodanka ahaa dhab ahaan helay waayo-aragnimo ah. hadda Eebana waa ogaaday waxa ay ahayd meel aad u xun, oo isna ma uusan rabin in walaalihiis this la kulmi lahaa.
meel ka mid ah Cadaab
Dadka ku jira cadaabta, cadaabi iyo cadaabi. Iyo ma ahan oo keliya muddo gaaban ka dibna u joojiyaan. No, tag on weligiis. Weligiis.
meel ka mid ah Cadaab halkaas oo dad aan marnaba ka soo. Dadka la xukumay meesha cadaabta ah cadaab abid mana jiri doonto weligeed free.
Luke 16:29 - Laakiin Ibraahim wuxuu ku yidhi, Waxay leeyihiin Muuse iyo nebiyada. Waxay si aad u dhegaysato doonaan.
Waxay leeyihiin Muuse iyo nebiyada ee "Ibraahim iyo sidoo yaabo in uu yiri:. Waxay leeyihiin Kitaabka Quduuska ah.
Guryo badan ee Sweden maanta, Kitaabka Quduuska ah. Waxaa laga yaabaa in taribuunka in guugta guranayeen ciidda, laakiin waxay si kasta u samayn.
Ciid Kitaabka Quduuska ah. waxaa fur iyo bilaabaan inay wax akhriyaan. Rumeeyana!
Waxaad wax ka badan Kitaabka Quduuska ah wuxuu u baahan
Waxaad ma aha Kitaabka Quduuska ah u baahan tahay. Waxaad u baahan tahay ma buugaag kale. Kitaabka Quduuska ah waxaa ku filan.
Aad rabto in aad caddayn, waa in aad ka akhrisan Kitaabka Quduuska ah. Aad rabto in aad runta, waa in aad ka akhrisan Kitaabka Quduuska ah. Markaas waa in aad aaminsan tahay waxa ku jira.
In Ciise aad fahamsan
Laakiin si ay u leeyihiin fahanka saxda ah ee Kitaabka Quduuska ah oo ay xaq u leeyihiin in ay aaminsan yihiin, markaa waxaad u baahan Ciise. Ma rabtaa inaad rumaysan oo runta yaqaanu ka dibna aad u baahan tahay Ciise. In Ciise aad u ogaato.
Ciise erayada Kitaabka Quduuska ah si nolosha iyada oo Ruuxa Quduuska ah. Waa in aad had iyo jeer ka akhrisan Kitaabka Quduuska ah oo ku saleysan Ciise. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay in la aqbalo Ciise haddii aad aan weli si sameeyey.
Kitaabku waxa uu ku saabsan yahay Ciise
Kitaabka Quduuska ah oo dhan waa wax Ciise ku saabsan - ka cover si ay u daboosho. Laga soo bilaabo aayadda ugu horeysay ee aayadda ee la soo dhaafay.
Kitaabku waxa uu ku saabsan yahay waxa Ciise ayaa kuu sameeyey iyo waadna badbaadi doontaa marka aad isaga u aqbal.
Kitaabka Quduuska ah waa in aad u sheegto sida ay u badbaadi.
Dhegayso Kitaabka Quduuska ah
Waxaad u baahan tahay ma buugaag kale. Waa Kitaabka Quduuska ah in aad dhagaysan doonaa si samayn waxa uu sheegaayo. Kuwaas oo ay u aqbalaan Ciise iyo badbaadi!
ninkii wuxuu tegey xagga jahannamo
Waxaa jiri jiray nin hodan ah kuwaas oo dhar gududan oo jilicsan sidan oo maalin kasta oo farxad iyo dabaaldeg ku noolaa. Laakiin iriddii uu jiifay nin miskiin Laasaros la odhan jiray, isagoo boogo daboolay. Waxa uu ugu xiisooday inuu u cunaan uu ka dheregno waxa miiska ninkii hodanka ahaa ka dhacay. Haa, eeyaha u yimid oo boogihiisa leefleefi jireen.